Wararka - Faahfaahinta dayactirka iyo dayactirka qafis alxanka
Su'aasha 1aad: Sideen u yareyn karnaa dharka qafis alxanka?
1. Waa wax iska caadi ah soo saarayaasha mashiinka alxanka qafis inay xirtaan qaybo inta ay isticmaalayaan. Si loo yareeyo xirashada udhaxeysa qaybaha, waa inaan fiiro gaar ah u yeelanaa faahfaahinta, si waxqabadkamashiinka alxanka qafis waa la isticmaali karaa, iyo shaqaalaha ka shaqeeya mashiinka alxanka qafis u baahan tahay inaad aqoon u yeelatid ku shaqeynta mashiinka si xirfad leh, hanashada waxqabadka iyo habsami u socodka mashiinka, isla markaana ku xallin karto dhibaatada waqtiga mashiinku caadi yahay, si loo hubiyo nolosha adeegga mashiinka alxanka qafis.
2. Inta lagu guda jiro hawlgalka soo saaraha mashiinka alxanka qafis, si adag u raac habraacyada oo mamnuuca culeys xad dhaaf ah, taas oo kaliya kordhin doonin duugista udhaxeysa qeybaha laakiin sidoo kale dardar galinaysa dhaawaca mashiinka alxanka qafis.
3. Markaad shaqeyneyso mashiinka alxanka qafis, waa mamnuuc in la dedejiyo xawaaraha wax soo saarka si loo wanaajiyo waxtarka shaqada, taas oo u horseedi doonta duugista iyo jeexjeexa mashiinka isla markaana saameyn ku yeelan doonta cimriga mashiinka.
Su'aasha 2aad: Sidee looga fogaan karaa cillad la'aanta mashiinka alxanka qafiska inta lagu jiro hawlgalka?
1. Marka hore, hawl wadeenada mashiinka alxanka qafis soo saaraha waa inuu lahaadaa tiknoolajiyad aqoon leh, uuna aqoon u leeyahay waxqabadka mashiinka alxanka qafis, wuuna xallin karaa dhibaatada waqtiga ay dhacdo xaalad aan caadi ahayn, si looga fogaado waxyeelo soo gaadho mashiinka alxanka qafis.
2. Samee hawsha baaritaanka kahor intaadan shaqeynin qafiska qafiska, si taxaddar leh u hubi in saldhig kasta iyo qayb kastaa ay ku jiraan heerka shaqada ee caadiga ah, oo ka warbixi wixii cillad ah ee jira waqtiga.
3. Shaqada xad dhaafka ah waa la mamnuucay inta lagu jiro hawlgalka alxanka qafis. Shaqada xad-dhaafka ahi kama sii dari doonto xirashada udhaxeysa qaybaha, laakiin sidoo kale waxay si fudud u dhaawaceysaa welxaha qafiska.
4. Hawl maalmeedka, mashiinka alxanka qafis soo-saareyaashu waxay u baahan yihiin inay si joogto ah u dayactiraan mashiinka alxanka qafis, si loo kordhiyo nolosha adeegga loona yareeyo dhacdooyinka fashilaadda.
Waxyaabaha kor ku xusan waa dhawr su'aalood oo soo saarahayaga mashiinka alxanka qafis kuu soocay. Waxaan rajaynayaa inaan kuu soo kordhiyo caawimaad dheeraad ah. Haddii maqaalkani uusan xallin shakigaaga, waxaad si toos ah farriin ugaga tagi kartaa websaydhka si aad noogu sheegto, shaqaalaheenna ayaa go'aansan doona Waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa waqtiga, waad ku mahadsan tahay taageeradaada.
Gawaarida Gawaarida, U Bolts, Qaab dhismeedka, Hex handarraabbadeedii, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, Lag Bolts,